Ciidamada AMISOM oo dhaq dhaqaaqyadii ugu dambeeyay ka wada Shabellaha Hoose (Sawirro) – idalenews.com
Ciidamada AMISOM oo dhaq dhaqaaqyadii ugu dambeeyay ka wada Shabellaha Hoose (Sawirro)
Ciidamada AMISOM ayaa dhaq dhaqaaqyo ciidan oo xoog leh ka wada deegaanadii shalay ay la wareegeen ee Gobolka Shabellaha Hoose, iyagoo qorsheynaya inay u gudbaan deegaanada kale ee gobolkaas.
Sarkaal ka tirsan AMISOM oo ka qeyb qaadanaya howl galka ka socda Shabellaha Hoose ayaa sheegay inay xaqiijinayaan amaanka deegaanadii ay la wareegeen, isla markaana howl galkooda aanu istaagi doonin.
Cutubyo ka tirsan AMISOM oo wata Taangiyo ayaa lagu arkay gudaha Janaale iyo buundada, iyadoo fariisimo milateri iyo difaacyo ka sameystay daafaha deegaanka, waxaana saaka degan xaalada.
Inkastoo Janaale ay tahay meel ku caan ah wax soo saarka beeraha iyo ganacsiga, ayaa waxaa saaka hakad ku jira Ganacsigii deegaanka oo maalinta Jimcaha uu ahaa maalinta kaliya ee sida weyn loo ganacsado, waxaana saameeyay is bedelka ay gashay degmada.
Sidoo kale deegaanada kale ee Ciidamada gaareen sida degmada Awdheegle iyo tuulooyinka ku dhow dhow ayaa iyana laga soo sheegayaa xaalad degenaansho.
Abaanduulaha Ciidamada xooga dalka Jen. C/kariin Yuusuf Aadan Dhega-badan ayaa sheegay in aanay hakan doonin ilaa ay ka gaaraan meesha ugu dambeysa ee Al-Shabaab joogaan, waxaana uu tilmaamay in howl galkooda uu guul ku soo dhamaaday.
Ma jirin wax iska hor imaadyo oo toos ah, inkastoo Al-Shabaab la sheegay in maalmihii u dambeeyay aysan ku xooganeyn deegaanada ay qabsadeen Ciidamada huwanta ah.
Maxkamada sare ee dalka Kenya oo diiday inay ka joojiso tartanka doorashada Uhuru Kenyatta